सुर्खेत केन्द्रित प्रदेश राजनीति – Sajha Bisaunee
सुर्खेत केन्द्रित प्रदेश राजनीति
मंसिर २३ गते कर्णाली एक्स्पो उद्घाटनका लागि सुर्खेत आएका प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसको दुई साता बित्न नपाउँदै पुनः सुर्खेत आए । सुर्खेतमा आयोजित माओवादी केन्द्रको प्रदेश नं. ६ को बैठक तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा सहभागी हुन उनी दोस्रो पटक सुर्खेत आएका हुन् ।
प्रचण्ड लगायत माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत लगायत पनि सुर्खेत आएका भोलिपल्टै माओवादी छोडेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई सुर्खेत आइपुगे । नयाँशक्तिले पनि आफ्नो पार्टीको प्रदेश नं. ६ को कार्यकर्ता भेला सुर्खेतमा आयोजना गरेको थियो । उक्त भेलामा भट्टराईले कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।
पछिल्लो दुई सातामा सुर्खेतमा भएका प्रमुख दुई राजनीतिक गतिविधि मात्रै हुन् यी । विस्तारै सुर्खेतमा राजनीतिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । प्रदेश ६ को राजनीति सुर्खेत केन्द्रित हुँदै गएको छ । प्रस्तावित प्रदेश नं. ६ को सम्भावित राजधानीको रूपमा लिइएको सुर्खेतलाई पछिल्लो समय बढ्दै गएका यहाँका राजनीतिक गतिविधिले पनि राजधानी बनाउन थप आधार तयार पार्दै गएको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाहेकका अन्य प्रमुख दलहरूले प्रदेश ६ को राजनीतिलाई सुर्खेत केन्द्रित गरेर आफ्ना गतिविधि अघि बढाइसकेका छन् । नेकपा एमालेले सुर्खेतमै प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । उसले प्रदेश भेला पनि सुर्खेतमा नै गरिसकेको छ र सुर्खेतलाई राजधानी बनाउने गरी प्रदेश ६ को नाम कर्णाली प्रदेश राख्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि सुर्खेतमा प्रदेश ६ स्तरको भेला गर्नुका साथै बैठक पनि सुर्खेतमा नै गरिसकेको छ । माओवादीको प्रस्ताव पनि एमालेसँग समान छ । नाम कर्णाली प्रदेश र राजधानी सुर्खेत बनाउन एमाले र माओवादीको मत मिलेको छ । त्यही अनुसार यी दुई पार्टी यो प्रदेशमा प्रदेश केन्द्रित राजनीतिक गतिविधिमा अन्य दलहरूभन्दा अघि देखिएका छन् । उनीहरूले प्रदेश कमिटी समेत गठन गरी आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश नं. ६ को विकास र समृद्धिका खाका समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । दुवै पार्टीका समृद्धिका खाका पनि सुर्खेत केन्द्रित नै छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रपछि प्रदेश गतिविधिमा सक्रिय देखिएको छ, नयाँ शक्ति नेपाल । नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले पनि सुर्खेतमा पटक–पटक जिल्ला र प्रदेशस्तरका भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिसकेको छ । संयोजक बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू पनि पटक–पटक सुर्खेत आएर प्रदेशस्तरका कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसकेका छन् ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीले सुर्खेत केन्द्रित प्रदेश ६ को राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहँदा मुलुकको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस भने मौन छ । कांग्रेसले सुर्खेतमा अहिलेसम्म प्रदेशस्तरको कुनै कार्यक्रम आयोजना गरेको छैन ।
सुर्खेतमा राजनीतिक गतिविधि बढेसँगै यहाँका नागरिकमा पनि उत्साह थपिएको छ । सुर्खेत राजधानी बन्ने आधार बलियो बन्दै गएकाले यहाँका नागरिकमा खुशी छाएको हो । सुर्खेत प्रदेशको राजधानी बन्दा यहाँको विकासमा मात्र नभएर सेवा सुविधामा समेत वृद्धि हुने भएकाले पनि सुर्खेतवासी हर्षित छन् । यद्यपि राजधानीको टुङ्गो भने कहिले लाग्ने हो निश्चित छैन ।
प्रकाशित मितिः ८ पुष २०७३, शुक्रबार १३:१३